क्रिस्टियानोको कमाल- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन ३०, २०७५ एएफपी
टुरिन — क्रिस्टियानो रोनाल्डोले मंगलबार सानदार ह्याट्रिकको साथ युभेन्ट्सलाई च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलमा पुर्‍याएका छन् । र, स्पेनिस समर्थकसामु आफ्नो पुरानो प्रतिद्वन्द्वी एट्लेटिको म्याड्रिडका प्रशिक्षक डिएगो सिमोनीको चर्चित ‘क्रच ग्य्राबिङ सेलिब्रेसन’ को नक्कल गरिदिए ।
३४ वर्षीय पोर्चुगिज सुपरस्टारले दुई गोल हेडमार्फत् र खेलको अन्त्यतिर पाएको पेनाल्टी सदुपयोग गरे । घरेलु मैदान टुरिनमा एट्लेटिको म्याड्रिडलाई समग्रमा ३(२ गोलले पछि छोडै इटालियन च्याम्पियन युभेन्ट्स शुक्रबार हुने क्वाटरफाइनल ‘ड्र’ मा प्रवेश गरेको छ ।
नियमित समय सकिनु ४ मिनेटअघि पेनाल्टीमार्फत निर्णायक गोल गरेपछि रोनाल्डो एट्लेटिकोका समर्थकतर्फ फर्किएर सिमोनीको चर्चित हाउभाउ नक्कल गरिदिए । पहिलो लेगमा २(० को जित हासिल गरेपछि सिमोनी यस्तै हाउभाउ प्रदर्शन गरेका थिए ।
‘उनले वान्डा मेट्रोपोलिटानो रंगशालामा मैले यस्तै गरेको देखेका रहेछन् । मैले जस्तै उनले पनि आफ्नो चरित्र देखाउने प्रयास गरे,’ एट्लेटिकोका प्रशिक्षक सिमोनीले भने, जसले यही हाउभाउका कारण यूईएफएबाट २० हजार पाउन्ड जरीवाना खेप्नुपरेको थियो ।’
‘क्रिस्टियानो रोनाल्डो संसारकै उत्कृष्ट फुटबलर हुन् । उनी ठूला खेलहरू यस्तै प्रदर्शन देखाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छन्,’ अर्जेन्टिनी प्रशिक्षकले थपे ।
रियल म्याड्रिडका पूर्व खेलाडी रोनाल्डोले एट्लेटिकोविरुद्ध ३३ खेलमा ४ ह्याट्रिकसहित २५ गोल पूरा गरेका छन् । पाँचमध्ये सन् २०१४ र २०१६ को च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा रियलले एट्लेटिकोलाई नै हराएर उपाधि जितेको थियो । सन् २०१६ को फाइनलमा रोनाल्डोले निर्णायक गोल गरेका थिए । सन् २०१७ को सेमिफाइनलमा एट्लेटिकोविरुद्ध ह्याट्रिक गरेका थिए ।
‘युभेन्ट्सको इतिहासमा यस्तो पुनरागमन कहिल्यै भएको थिएन,’ रोनाल्डोले भने, ‘त्यसै कारण युभेन्ट्सले मलाई यस्तै प्रकारको खेलमा सहयोग गर्न खरिद गरेको हो । म आफ्नो काम गर्छु र निकै खुसी छु । यो एक जादुयी साँझ रह्यो ।’
महादेशीय प्रतिस्पर्धामा उपलब्धि हासिल गर्ने योजनासाथ युभेन्ट्सले यसै सिजनको सुरुमा रोनाल्डोलाई १ सय मिलियन युरोमा रियल म्याड्रिडबाट किनेको थियो । सिरी ए च्याम्पियन युभेन्ट्सले सन् १९९६ यता च्याम्पियन्स लिग उपाधि जित्न सकेको छैन । पछिल्लो चार सिजनमा उसले फाइनलमा पुगेर उपाधि गुमाउनुपरेको छ ।
‘यो एक विशेष साँझ हुनु नै थियो । केवल लक्ष्यका लागि मात्र होइन, टिमको उत्कृष्ट आत्मविश्वासका लागि पनि,’ पाँचपल्टका बालोन डी’ओर विजेता रोनाल्डोले भने, ‘च्याम्पियन्स लिगका लागि मानसिक रूपमा दरिलो हुने समय हो र हामी सही बाटोमा छौं ।’ ‘फाइनलबारे कुरा गर्न निकै हतारो हुनेछ । हामी एकपछि अर्को खेल हेर्दै अघि बढ्ने छौं । एट्लेटिको कठिन प्रतिद्वन्द्वी त हो तर हामी पनि कमजोर छैनौं र यस्तो नतिजाका लागि योग्य छौं ।’
च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक ८ ह्याट्रिक गर्ने बार्सिलोनाका लियोनल मेसीको कीर्तिमान रोनाल्डोले बराबरी गरेका छन् । रोनाल्डो च्याम्पियन्स लिगको ७७ नकआउट खेलमध्ये ७७ गोलमा प्रत्यक्ष संग्लग्न भएका छन्, ६३ गोल र १४ असिस्ट ।
रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिग इतिहासमा अहिलेसम्म १ सय २४ गोल गरेका छन् । जबकि एट्लेटिकोले अहिलेसम्म यस प्रतियोगितामा १ सय १८ गोलमात्र गरेको छ । रोनाल्डो पछिल्लो ६ सिजनदेखि च्याम्पियन्स लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । यस सिजन पनि उनले आफ्नो गोलसंख्या ४ पुर्‍याएका छन् ।
‘रोनाल्डोजस्ता खेलाडीका लागि च्याम्पियन्स लिग मात्र १ गोलले टुंग्याउनु पनि न्यायसंगत हुन्थेन,’ युभेन्ट्सका प्रशिक्षक मासिमिलानो एलेग्रीले भने, ‘आजको साँझ सानदार थियो । घरेलु समर्थकको साथ र इटलियन फुटबलकै लागि स्मरणीय रह्यो ।’
अविश्वसनीय नतिजासाथ च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा पुगेपछि बुधबार बिहानै मिलान स्टक एक्सचेन्जमा युभेन्ट्सको शेयर मूल्य २० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ । एक्सचेन्ज खुल्नेबित्तिकै युभेन्ट्सको मूल्य २३ प्रतिशतले बढेको थियो । बन्द हुने समयमा १७.०९ प्रतिशतमा आएर रोकिएको थियो ।
सिटीको कीर्तिमानी जित
म्यान्चेस्टर– मंगलबार राति जर्मन टोली साल्केविरुद्ध ७(० गोलको फराकिलो जित निकाल्दै क्वाटरफाइनलमा पुगेपछि म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले भनेका छन्, ‘मेरो टोली च्याम्पियन्स लिगमा कसैसँग डराउँदैन ।’
अन्तिम समयमा दुई गोल गरेर पहिलो लेग सिटीले ३(२ ले जितेको थियो । इतिहाद रंगशालामा अधिक प्रभावशाली देखिएको सिटीले अन्तिम १६ मा १०(२ गोलको समग्र नतिजा निकाल्न सक्यो ।
सर्जियो अगुइरोले पेनाल्टीमार्फत ३५ औं मिनेटमा सिटीका लागि गोलको खाता खोले । त्यसको तीन मिनेटपछि नै उनैले अग्रता दोब्बर बनाए । आफ्नो पूर्व क्लबका लागि लेरोय सानेले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा सिटीले ३(० को अग्रता बनायो । त्यसपछिका तीन गोलमा उनै सानेले बल उपलब्ध गराएका थिए ।
रहिम स्टर्लिङ, बर्नान्डो सिल्भा, फिल फोडेन र ग्याब्रियल जेससले एक एक गोल गरी सिटीले च्याम्पियन्स लिग इतिहासमै घरेलु मैदानमा सबैभन्दा फराकिलो अन्तरको जित निकाल्यो ।
ग्वार्डिओलाको टिम सिटीले फेब्रुअरीमा लिग कप उपाधि उचालेको थियो । प्रिमियर लिगको शीर्षस्थानमा लिभरपुलभन्दा १ अंकले अगाडि रहेको सिटी यसै साताको अन्तिममा एफए कप क्वाटरफाइनलमा स्वान्सीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । ‘पहिलो गोलपछि हामीले उच्च स्तरको खेल खेल्यौं, हामी गम्भीर थियौं र जिम्मेवारी पूरा गर्‍यौं,’ खेलपछि प्रशिक्षक ग्वार्डिओलाले भने, ‘पहिलो हाफको अन्तिम १५ मिनेट र दोस्रो हाफमा हामी उत्कृष्ट थियौं । हामीले तीव्र र गतिशील खेल देखायौं, त्यसै कारण गोल निस्कियो ।’
१०(२ गोलको समग्र नतिजा च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा फराकिलो हो । रक्षात्मक रूपमा कमजोर देखिएको साल्केविरुद्धको यस नतिजा लामो समयसम्म स्मरणीय रहने छैन ।
बार्सिलोनामा रहँदा दुईपल्ट च्याम्पियन्स लिग जितेका ग्वार्डिओलाले यसै साता दाबी गरेका थिए कि युरोपेली महाशक्ति टोलीको अगाडि उनको टोली ‘किशोर’ हो । ग्वार्डिओलाका पूर्ववर्ती म्यानुयल पेलेग्रिनीको कार्यकालमा सन् २०१६ मा सिटीले अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा सेमिफाइनलसम्म यात्रा गरेको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०९:३४
दस महिनामै फर्किए जिदान
फाल्गुन २९, २०७५ एएफपी
म्याड्रिड — जिनेदिन जिदानले २९ मिनेटसम्म विभिन्न प्रश्नको सामन गर्नुप¥यो । उपस्थित सबैको प्रश्नको सार दुईवटा थिए– अहिले किन ? र अब के ? सोमबार सान्टियागो वर्नबाउको खचाखचपूर्ण हलमा राउल र रोबर्टो कार्लोस अगाडिको सिटमा बसेका थिए । आधिकारिक घोषणाको डेढ घण्टापछि पत्रकारले प्रश्नका लागि पहुँच पाएका थिए ।
सान्टियागो सोलारीलाई रियल मड्रिडले प्रशिक्षक पदबाट बर्खास्त गरेको थियो र उनको स्थानमा २ सय ८४ दिनपछि जिनेदिन जिदानले पुनरागमन गरेका थिए । गत वर्ष मे ३१ मा क्लबका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजकै साथमा बसेर जिदानले भनेका थिए कि टोलीले उनको साथ जित हासिल गर्न सक्दैन । तर, उनीहरू जिदानबिना जित्न असफल भए । सुरुमा बर्खास्तीमा परेका स्पेनका प्रशिक्षक जुलियन लोपेटेगीको साथमा र, त्यसपछि अन्तरिम हुँदै स्थायी प्रशिक्षक बनेका सान्टियागो सोलारी, जसको नेतृत्वमा टोली ६ दिनको बीचमा मुख्य तीन प्रतिस्पर्धाबाट लगभग बाहिरिएको थियो ।
सोलारीको बहिर्गमन निश्चित थियो । तर ला लिगाको बाँकी ११ खेलका लागि उपयुक्त विकल्प आवश्यक बन्यो । मड्रिडको संकटपूर्ण समयमा कोही पनि त्यो जोखिम हासिल गर्न तयार देखिएका थिएनन् । परिस्थिति कसरी बदलियो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा जिदानले भने, ‘जब अध्यक्षले मलाई बोलाउनुभयो र मलाई लाग्यो– जाउँm । जिदान स्पेनमै बस्छन् । उनले केही खेलहरू पनि हेरेका छन्, जबकि उनका तीन छोराहरू क्लबमै विभिन्न स्तरमा फुटबल खेलिरहेका छन् । बाहिरबाट देखिएजस्तै आफ्नो पुनरागमनलाई उनले पनि करिअरमा छलाङको रूपमा मान्न सक्दैनन् । तर पनि उनका लागि सबैभन्दा बढी लालच यो हुन सक्छ कि टोली आफ्नो स्वभाविक लय भेट्टाउन असफल छ । महान् प्रशिक्षक र खेलाडीमा हमेसा एक आत्मविश्वास हुन्छ । उनीहरूका लागि जुनसुकै समस्या पनि निकै ठूलो हुँदैन ।
जिदानलाई थाहा छ कि लगातार तीनपल्ट च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको भन्दा धेरै अधिकार लिएर उनी पुनरागमन गर्न पाउनेछन् । जसरी दुई प्रशिक्षक आए, गए । बर्नबाउको सीट खाली हुँदा र बार्सिलोनाले लगातार अंकतालिकामा अग्रता बढाइरहँदा जिदानको महत्व र मूल्य बढ्दै गयो । म फर्केर आएँ किनभने अध्यक्षले मलाई बोलाउनुभयो । म उहाँलाई सम्मान गर्छु, यो क्लबलाई सम्मान गर्छु,’ उनले भने, ‘अर्को वर्षसम्ममा निश्चित रूपले हामी हरेक कुरा परिवर्तन गर्नेछौं ।’ जिदानले सिजनको अन्त्यसम्म कुर्न सक्थे तर त्यतिबेलासम्म यो अवसर गुम्न सक्ने भय थियो । जोसे माउरिन्होले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिसकेका थिए ।
अध्यक्ष पेरेजमाथि समर्थकसहितको चौतर्फी दबाब बढदो थियो । केही अखबारले मत सर्वेक्षणलाई आधार बनाउँदै मड्रिडको असफलतामा प्रशिक्षक सोलारीभन्दा बढी क्लब प्रशासन दोषी रहेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । कप्तान सर्जियो रामोसको नेतृत्वमा खेलाडीहरूले पनि आलोचना गर्न थालेका थिए ।
गएको साता आयाक्ससँगको पराजयपछि आक्रामक देखिएका कप्तान रामोसले क्लब प्रशासन र अध्यक्ष पेरेजप्रति लक्षित गरी भनेका थिए, ‘समस्याको कारक खराब योजना हो ।’ जिदानजस्ता प्रशिक्षकले यस समस्याको पूर्ण समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।
‘हामीलाई एक सानदास युगको सुरुआत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ पेरेजले भने, ‘यही कारणले हामीले जिनेदिन जिदानलाई स्वागत गरेका छौं ।’ जिदानले अबको तीन महिनामा क्लबमा गर्नुपर्ने परिवर्तनका बारेमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । उनी प्रस्ट योजनाका साथ फर्किएका छन् । गत सिजन मड्रिडले लगातार तेस्रो वर्ष च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्दै गर्दा ला लिगामा विजेता बार्सिलोनासँग १७ अंकले पछि थियो । अहिले १२ अंकले पछि छ ।
‘मैले यो भुल्दिन कि हामीले के–के जित्यो तर म ती खराब कुराहरू पनि कहिल्यै बिर्सने छैन कि गत सिजन हामीले के गर्न सकेनौं,’ उनले भने । अधिक खर्चका लागि उनले पर्याप्त अधिकार पाउन सक्छन् । तर जिदानका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सुधार र क्रान्तिको सन्तुलन मिलाउनु हो । नयाँ सुरुवातले त्यस्ता प्रतिभालाई असर पु¥याउन सक्छ जसले पछिल्लो समय आफ्नो स्तरमा व्यापक सुधार गरिरहेका छन् ।
युवा खेलाडीहरू भिनिसियर जुनियर, सर्जियो रेगुइलन, मार्कोर लोरेन्टेजस्ता खेलाडी प्रत्यक्ष मारमा पर्न सक्छन् । रोनाल्डो गए, यो कुरा कसैले लुकाउन सक्दैन कि टिमले उनलाई सम्झिरहेको छ । त्यो शून्यता भर्नका लागि मैदानमा अन्य खेलाडीहरू संघर्षरत छन् । ग्यारेथ बेल र जिदान गत सिजनको मध्यदेखि बोलचाल गरेको पनि नगण्य देखिएको थियो । फ्रान्सेली प्रशिक्षकको पुनरागमन निश्चित रूपमा उनका लागि उत्साहजनक छैन । उच्च सम्भावना यो छ कि उनले बिदाइ लिनेछन् ।
निर्णय मार्सेलो र इस्कोमाथि पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । किनभने दुवैको प्रदर्शन यो सिजन सुक्खा छ । केलर नाभास जिदानका मनपर्ने गोलरक्षक थिए, जो थियावट कोर्टवाका लागि समस्याको कारक बन्न सक्छ । लुका मोड्रिडले महसुस गर्न सक्नेछन् कि यो केही नयाँ गर्ने समय हो । जिदानको मुख्य हतियार भिनिसियस हुन्, जो गोलीगाँठाको चोटका कारण सायद यस सिजन खेल्न सक्दैनन् । उनी मड्रिडका चम्किला तारा हुन् । अग्रपंक्तिका तीनमध्ये बायाँ क्षेत्रबाट १८ वर्षीय ब्राजिलियन युवालाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । जुन स्थानका लागि चेल्सीका इडेन हाजार्डलाई मड्रिडले आँखा लगाइरहेको छ । तत्कालका लागि रियल मड्रिडले अधिक आत्मविश्वासका साथ शनिबार सेल्टा डी भिगोसँग खेल्दै छ । यस खेलले प्रस्ट पार्नेछ कि जिदान कहिल्यै टाढा भएकै थिएनन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ १०:२७